Soo-saareyaasha Qaab duritaanka iyo Alaab-Soo-saarka Qaab-shiinaha Shiinaha
Qaybta ugu muhiimsan ee caaryada gawaarida waa caaryada daboolka. Noocan dhinta ayaa badanaa u dhinta hargab. Marka si guud loo eego, “caaryada baabuurta” waa ereyga guud ee wasakhda loo adeegsado soo saaridda dhammaan qaybaha baabuurta. Tusaale ahaan, wasakhda shaambadaha, wasakhaha la duray, wasakhda been abuurka ah, wasakhda wax wasakhda, caaryada dhalada ah, iwm. Qaybaha shaabad lagu kor dhigo jirka gaariga qiyaastii waxaa loo qaybiyaa qaybo dabool, qaybo dogob ah iyo qaybo guud oo shaabbad ah. Qaybaha shaabad lagu dhufto ee si cad u muujin kara ...
Qeybta gawaarida sanadkiiba waxay sameysaa qiyaastii 1200 oo wasakh ah celcelis ahaan, gaar ahaan waxay kufiican tahay caaryada gudaha iyo kuwa dhex dhexaadka ah, kiiska caadiga ah sida xumbada caaryada dashboard ee ford, Volkswagen, Benz, Great Wall iyo stc. gaaska caawinta albaabka gaaska, wuxuu muujiyaa caaryada calaamadda calaamadda calaamadda aan yareyn, caaryada silsiladda hoose ee wax isku dhejisa ee loo yaqaan 'jaguar Sanmen base' waxay daboolaysaa aag dhan 36,000 oo mitir murabac ah oo ay la socdaan in ka badan 350 shaqaale ah, waxayna soo saartaa in ka badan 600 nooc oo wasakh ah sanadkiiba. Waa spec ...
Qeybaha hore iyo gadaal ee gaariga waxaa lagu qalabeeyaa bambooyin, oo aan kaliya laheyn howlaha qurxinta, laakiin waxaa taas ka sii muhiimsan, inay yihiin aalado badbaado oo dhuuqaya isla markaana yareynaya saameynta dibedda, jirka ilaaliya oo ilaaliya jirka iyo dadka saaran. Burburiyeyaasha hore iyo gadaal ee gaariga ayaa inta badan ka samaysan qalab bir ah. Birta kanaalka U-qaabeeya waxaa laga shaabadeeyey taarikada birta oo dhumucdeedu ka badan tahay 3 mm, dushana waa chrome-plated. Waa la jeexjeexay ama lagu dhajiyay biraha looxyada, ...
System Nidaamka Dibedda
System Nidaamka Gudaha
System Nidaamka Qaboojinta
Series Taxanaha Gudaha
Condition Qaboojiyaha / Qaboojiyaha
Series Qalabka taxanaha ah
Xalka iyo sameynta caaryada qalabka caafimaadka ee waaweyn, qalabka jir dhiska sida MRI, CT iyo treadmill iwm faa iidooyinkeena Tayada Sare (Qaab & Tayada Waxsoosaarka) Waqtiga la keenayo (Sample Ansixin & Bixin Qaab ah) Kharashka Xakamaynta (Qiimaha Tooska ah iyo midka aan tooska ahayn) Adeeg (Adeeg Loogu Talo Galay Macaamiisha, Shaqaalaha & Alaab-qeybiyaha) Nidaamka— U8 ERP nidaamka maareynta Jadwalka — Dukumintiga Xakamaynta Mashruuca Injineernimada — ISO9001-2008 Istaandarada — Qiimaynta Waxqabadka Shaqaalaha Syste Kaihua waxay u hoggaansamaan “dadka ...
Bishii Maarso 2-3, 2021, Kaihua Mold "Digital ...
8 subaxnimo Julaay 5, 2020, Kaihua Mould's 2 ...
2021.3.4 Yuan Chengmao, Guddoomiye kuxigeenka ...